के फेसबुकमा लाइभ भिडियो हेर्ने गर्नुभएको छ ?, अबदेखि पैसा लाग्नेछ है ! – Makalukhabar.com
२०७७ जेष्ठ १८, आईतवार ०८:४०
के फेसबुकमा लाइभ भिडियो हेर्ने गर्नुभएको छ ?, अबदेखि पैसा लाग्नेछ है !
मकालु खबर	 २०७७ बैशाख २२ गते प्रकाशित 44 0
काठमाडौं । अबदेखि फेसबुक लाइभ भिडियो हेर्नको लागि पैसा लाग्ने भएको छ । अहिलेसम्म यस्तो कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपरेकोमा अब देखि फेसबुकलृ नयाँ नियम लागू गरेके हो । अब फेसबुक लाइभको भिडियो हेर्नका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागु हुने भएको छ ।
फेसबुक कम्पनीले फेसबुकमा अन्य मानिसहरूको लाइभ भिडियो हेर्नका लागि प्रयोगकर्ताले शुल्क तिर्नुपर्ने नियम लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण जारी लकडाउनका समयमा फेसबुक लाइभमार्फत् आफ्नो प्रस्तुति दिने कलाकारहरूको सहयोगका लागि फेसबुकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको बताएको छ । यसबाट सर्जक तथा साना व्यवसायीहरुलाई समेत लाभ प्राप्त हुने फेसबुकले जनाएको छ । लाइभ भिडियो हेर्न पैसा तिर्नुपर्ने नियम लागु भइसकेपछि फेसबुक लाइभमा आउने कलाकारहरूले अर्थोपार्जन गर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
फेसबुकले लाइभ भिडियोमा शुल्कको व्यवस्था लागु गर्नका एक नयाँ फिचर थप गर्नेछ । जसअनुसार लाइभ गर्ने फेसबुक प्रयोगकर्ताले लाइभमा आउनुअघि नै आफ्नो लाइभ भिडियो अरूलाई निःशुल्क रुपमा देखाउने कि सःशुल्क बनाउने भन्ने विकल्प रोज्न सक्नेछन् ।
लकडाउनका कारण घरमै बस्न बाध्य कलाकारहरूले फेसबुक लाइभमार्फत् आफ्नो प्रस्तुति दिएर आर्थिक लाभसमेत प्राप्त गर्न सकून् भन्नका लागि फेसबुकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको बताइएको छ। संगीतकार तथा गायक गायिकाहरू, कमेडियन, व्यायाम सिकाउनेहरूका साथै भाषण वा उद्घोषणका क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरू यस नियमबाट लाभान्वित हुनेछन् । फेसबुकको यो नयाँ फिचरमार्फत् प्रयोगकर्ताले आफ्नो लाइभ भिडियोबाट आफूले आर्थिक लाभ लिने नभई कुनै कल्याणकारी कार्यका लागि कोष संकलन गर्न सक्नेछन् । यस्ता प्रयोगकर्ताले आफ्नो लाइभ स्ट्रिममा डोनेट बटन थप गर्न सक्नेछन् । डोनेट बटनमार्फत् संकलित शतप्रतिशत रकम नै फेसबुकले गैरनाफामूलक संस्थाहरूको खातामा जम्मा गरिदिने छ।
यसअघि फेसबुकले आफ्नो गेमिंग सर्भिसका लागि सन् २०१८ मै यस्तो शुल्क तिर्नुपर्ने फिचर ल्याएको थियो । भिडियो गेम खेलाडीहरूका लागि विशेष रुपमा तयार गरिएको उक्त स्ट्रिमिङ प्लाटर्फममा फेसबुक प्रयोगकर्ताले कुनै पनि भिडियो खेलाडीको स्ट्रिममा रकम दान गर्न सक्दछन् । एजेन्सी
सोमबार राति १२ बजेदेखि कर्णाली प्रदेशका सबै नाका सिल
लकडाउन कार्यान्वयनका लागि सीमामा खटिएका सशस्त्रका एक असईको मृत्यु